Articles tagged 'constitution of zimbabwe'
Constitution in 16 languages 29 September 2018 HARARE - Government is yet to start producing translated versions of the Constitution in the 16 national official languages, five years after the enactment of the law. Speaking in Senate on Thursday, Beitbridge Senator Tambudzani Mohadi queried why the so-called “minority” languages had not ye...
Zim inching towards disputed polls 16 March 2018 HARARE - Zimbabwe's 2018 harmonised elections are likely to be disputed if no effort is made to strengthen democratic institutions and laws that govern elections. Already there are special voting blocs that are raising the red flag, among them those living in the Diaspora, prisoners, the physi...
'Ndebele king coronation unconstitutional' 11 March 2018 HARARE - Local Government minister July Moyo has said the coronation of Ndebele King Bulelani Lobengula Khumalo is illegal, as there is no provision for a king in Zimbabwe's Constitution. Speaking in the Senate last week, Moyo said only chiefs were recognised in the new Constitution. This c...
Con-Court reserves ruling in Constitution Amendment No. 1 challenge 1 February 2018 HARARE - The Constitutional Court (Con-Court) yesterday reserved judgment in an application filed by two MDC MPs Innocent Gonese and Fungayi Jessie Majome, who are challenging the passage of Constitution of Zimbabwe Amendment Bill No. 1 in Parliament. Gonese is the MDC chief whip and MP for Mu...